Imaaraatka oo ka hadlay Qarax Shalay ka dhacay Duleedka Muqdisho - Ceelhuur Online
Home > Wararka Dibadda > Imaaraatka oo ka hadlay Qarax Shalay ka dhacay Duleedka Muqdisho
Imaaraatka oo ka hadlay Qarax Shalay ka dhacay Duleedka Muqdisho
April 20, 2017 admin287
Imaraadka Carabta ayaa hadlay Qaraxa shalay lala eegtay kolonyo ay la socdeen Guddiga Gurmadka Abaaraha kuwaasi oo marayay Duleedka Magaalada Muqidsho, gaar ahaan meel aan sidaas uga fogeyn deegaanka Sarkuusta.
Kolnyadan Qaraxa Miinada lala eegtay ayaa waxa ay isugu jireen Guddiga Abaaraha Qaranka, Guddi ka socday Gobolka Banaadir iyo Gawaari kale oo ay saarnaayeen Saraakiil ka socday Bisha Cas ee Imaaraadka, waxayna kormeer ku sameynayeen xaalada dadka barakacayaasha ah ee ku sugan Degaanka Garasbaley duleedka Muqdisho.
Qaraxa Miinada ah ee la doonayay in lagu dilo saraakiisha u gurmaneysa shacabka, ayaanan jirin wax khasaare ah oo soo gaaray, inkastoo uu halkaasi ku gubtay Gaari ka mid ahaa kolonyada.
War Qoraal ah oo ka soo baxay Wasaaradda Arrimaha Dibadda Imaaraadka Carabta ayaa waxaa lagu sheegay in weerarkaasi uu ahaa mid fuleynimo ah oo uusan waxba u dhimi doonin howlaha gar gaarka ah ee Imaaraadka uu ku caawinayo shacabka Soomaaliyeed.
Barlamaanka oo isku raacay habka lagu dooranayo kuraasta la baneeyo
Diyaaradihii Khaatka Muqdisho geyn jiray oo Jowhar u weecday
Daawo: Hanbalyada Ciidda Madaxda Galmudug
Gaalkacyo:Masuul ka tirsanaa Wasaarada Maaliyada Puntland oo xalay la dilay
September 18, 2017 September 18, 2017 Cali Yare
Madaxweyne Farmaajo oo la kulmay Rugta Ganacsiga
Diyaarad sidday gargaar oo lagu rasaaseeyey Qansaxdheere
Gen Cali Gaab oo ka badbaaday qarax lala eegtay gaarigiisa.